Vacuum degassing chamber malagasy Famonoana efitrano fanondrahana by meditech - Issuu
Ny famoahana vaksa dia ny fampiasana vaksina mba hanesorana gasy avy amin'ny vovoka izay ho tafiditra ao anatin'ilay famolavolana rehefa mampifangaro ny singa. Mba hanomezana baoritra tsy misy bubble rehefa mampifangaroharo hidy sy silikôka ary lava kokoa ny fametrahana harena sarotra, ilaina ny efitrano fialan-tsasatra. Misy efitrano fandroana kely ilaina mba hanafoanana ny blasfemia ho an'ny fitaovana alohan'ny fandehanany. Tsotra tsotra izao ny dingana. Ny fitaovana fanenomana na ny famolavolana dia mifangaro araka ny torolalan'ny orinasa.
Kamia tsy misy rindrina ho an'ny fahombiazana amin'ny rivodoza mandritra ny fotoana maharitra. Ny efitranon'ny Vacuum Burhani dia manana boribory boribory eo an-tampony, mba hiarovana ny girondiseta misy ny
silicone. Ny mari-pamantarana vakina dia napetraka eo amin'ny seranan-tsambo iray, mba ho marina foana ny famakiana na dia eo am-pamotehana / fanesorana ilay efitrano. Famakian-teny amin'ny Hg sy Mpa. Ny kitapo rehetra dia voazaha tsikelikely mandritra ny 24 ora mialoha ny fametahana azy. (fampidirana latsaky ny 2.0 inHg amin'ny 24 ora) Toera-pidirana roa-sided mikarakara vaksiny ho an'ny faharetana sy ny fahamendrehana kokoa. Ny gasket dia simenitra marefo amin'ny Butane sy solvents hafa.  25 mm ny hatevin'ny Acrylic ho an'ny fiainana lava sy mazava tsara. Ny tsiranoka ara-tsakafo matevina amin'ny elastika dia afaka mampifandray / miala mora amin'ny pump / chamber. Sivana fantsona 50um ao amin'ny valizy fantsona mba hampihenana ny dingan'ny rivotra ary hisorohana vovoka / vovoka mivezivezy ao amin'ny efitrano. Mora amin'ny fametrahana sy ny vidiny mora foana: azo alaina 5 minitra ny efitrano. 45 andro maimaim-poana ny fanomezam-pahefana sy ny fanohanana ny fiainana. Kammer Vacuum: stainless steel Lid: Acrylic Vola mandeha amin'ny vaksina: silikôla, miorina amin'ny Butane sy solvents hafa. Fandaharam-potoana fitahirizana vakoka: 0,6 inHg marina. Fanamboarana valva: fantsom-pahaizana manerantany avo lenta mafy, miaraka amin'ny sivana 50um amin'ny seranan-
tsambo Fipoakan'ny vakoka: 3.3 '/ 1 metatra ny vidin-tsakafo ara-tsakafo-porofom-pihantsy silika, 3mm ny hatevin'ny rindrina (8mm I.D, 14mm O.D) Adapter Pump Pump: 3/8 "hose barb to 1/4 SAE ports port. . . Model No
Vacuum degassing chamber malagasy Famonoana efitrano fanondrahana
Famonoana efitrano fanondrahana Ny famoahana vaksa dia ny fampiasana vaksina mba hanesorana gasy avy amin'ny vovoka izay ho tafiditra ao an...